Sakano ny alika tsy hitsako ny kiraronao sy ny zavatra | Alika Manerantany
Rehefa mitondra alika kely na alika olon-dehibe any an-trano isika dia tsy maintsy mahafantatra ny fialambolin'izy ireo, ny fihetsik'izy ireo ary ny zavatra tian'izy ireo atao. Maro amin'izy ireo no lasa mankaleo ao an-trano, ary mampiala voly ny tenany manaikitra ny zavatrao. Ny kiraro no angano be indrindra, saingy afaka mandalo akanjo manaikitra izy ireo ary na dia ny fanaka aza, izay olana amintsika.
Raha te hisorohana izany tsy hitranga ianao dia tsy maintsy atao izany tapaho izany hatramin'ny voalohany. Ny famelana ny alika hanao izany mandritra ny fotoana fohy ary handray izany ho fahazarana miala sasatra sy hampiala voly dia ho sarotra kokoa amintsika amin'ny hoavy mba hisakanana azy tsy hijanona. Tsy maintsy manabe azy ianao na dia alika alika na alika olon-dehibe natsangana.
Ny torolàlana voalohany dia tsy tokony hanao izany velively isika mamorona fahazarana tsy tianay izy hanana ny alika. Raha omentsika ny fananantsika, na dia efa antitra aza, ny alika hanaikitra, dia hieritreritra izy io fa afaka manaikitra ireo zavatra manimbolo antsika tsy misy olana. Ka tsara raha hatrany am-boalohany, na alikakely na olon-dehibe, dia omentsintsika azy ny kilalao fitsakoany.
Ny fihetsika manaikitra sy mamaky zavatra matetika dia avy amin'ny fahasorenana. Ny herin'izy ireo dia tsy lanin'ny fampihetseham-batana ary tokony hifantoka amin'ny zavatra hafa izy ireo, ary indraindray dia ny manaikitra sy mamaky zavatra hitany. Izany no antony tsy maha-zava-poana ny fananarana azy ireo raha tsy hofongarantsika avy amin'ny fotony ilay olana.
Ny tokony hataonao amin'ny ankapobeny dia ny mandreraka ny alika ary manome azy manaitaitra hafa. Kilalao Kong mba hampiala-voly anao mitady ny lokanao, andro iray mitady valisoa manodidina ny trano na eny an-tsaha, andro iray amin'ny lalao. Ny alika manao fanatanjahan-tena ara-batana sy ara-tsaina dia alika mahay mandanjalanja izay tsy hitsako zavatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Sakano ny alika tsy mitsako ny kiraronao sy ny zavatrao
Mianara mifandray amin'ny alikao
Inona no hatao raha voan'ny epileptika ny alikako